Real Madrid Oo Santiago Bernabu Ku Dubatay Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo Oo Saddexley Goolal Ah Indhaha Aduunka Ku Xaday Iyo Los Blancos Oo Lug La Sii Gashay Finalka Champions Leaque-ga | Saxil News Network
Real Madrid Oo Santiago Bernabu Ku Dubatay Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo Oo Saddexley Goolal Ah Indhaha Aduunka Ku Xaday Iyo Los Blancos Oo Lug La Sii Gashay Finalka Champions Leaque-ga
Ciyaaraha (Saxilnews)Real Madrid ayaa Santiago Bernabeu ku dubatay kooxda ay dariska yihiin ee Atletico Madrid kadib markii ay 3:0 bilaa jawaab ah ku dardareen kooxda Diego Simeone oo ku fashilantay in ay xataa wax gool marti ah sii dhashato kulanka lugta hore ee afar dhamaadka Champions Leaque-ga. Real Madrid ayaa talaabo wayn sarre ugu qaatay in ay xili ciyaareedkii labaad soo gaadho finalka Champions Leaque-ga ay koobkiisa difaacanayso.
Cristiano Ronaldo ayaa indha aduunka ku xaday saddexley goolal ah isaga oo dhulka jiiday isla markaana rajadii markale ka dilay kooxda Diego Siemone oo kulankan si buuxa ugu fashilantay. Ronaldo ayaa kulankii labaad ee Champions Leaque-ga saddexley ka dhaliyay isaga oo kooxdiisa Los Blancos ka caawiyay in ay kulanka lugta labaad iskeento iyada oo lug kula sii jirta finalka Cardiff ee Champions Leaque-ga.
Kaydka:Kiko Casilla, Nacho Fernandez, Mateo Kovacic, Marco Asensio, James Rodriguez, Lucas Vazquez, Alvaro Morata.
Kaydka:Miguel Angel Moya, Alberto Rodriguez, Tiago, Thomas Partey, Nicolas Gaitan, Angel Correa, Fernando Torres.
Real Madrid ayaa ciyaarta ku bilaabtay qaab ciyaareed fiican oo dardar wayn leh iyada oo markiiba Atletico Madrid ku qasabtay in ay difaacasho buuxda gasho. Los Blancos ayaa maanka ku haysa muhiimada uu keeda kulankani u leeyahay maadama oo kulanka lugta labaad lagu ciyaari doono Vincente Calderon oo lugta labaad booqan doonto Atletico Madrid.
Zinedine Zidane ayaa sheegay in kooxdiisu ay ka soo qaadayso sidii aanu jirin kulan lugta labaad ahi, sidaa daraadeed Real Madrid ayay ka go’nayd in ay kulankan natiijo fiican hesho. Atletico Madrid ayaan qaybtii hore ee kulankan samayn bandigii laga filayay waxaana tatikada kulankan qaybtiisii hore ku guulaystay Zidane iyada oo waliba xidigaha khadka dhexe ee Madrid ay ciyaarta maamulayeen.
DAQIIQADII 7 AAD SIDAYNA GOOL U NOQON!! Real Madrid ayaa heshay fursadii ugu horaysay isla markaana ahayd mid gool loo qaatay kadib markii uu Carvajal kubbad ka soo tuuray xerada ganaaxa Atletico Madrid dhiniciisa midig laakiin kubbada uu goolhaye Oblak iska jooyay ayuu Benza haysta kaliya in uu shabaqa ku taabto balse kubbada ayaa birta iska agmartay!!.
Real Madrid ayaa cadaadiska saartay difaaca Ateltico Madrid oo ay waliba ka maqnaayeen xidigihii uu Simeone inta badan difaaca ku adkaysan jirin waxaana la filan karayay in Real Madrid ay shaqo wayn qabsan kartay, waxayna Los Blancos heshay koornayaal ay fursado ku abuurtay.
DAQIIQADII 10 AAD GOOOOOOOOOOOOL!! Cristiano Ronaldo ayaa kooxdiisa Real Madrid u dhaliyay goolka furitaanka kadib markii uu caawin ka helay Carlos Casemiro iyada oo difaaca Atletico iyo goolhaye Oblak ay ku fashilmeen in ay halista iska joojiyaan wuxuuna Ronaldo ciyaarta ka dhigay 1:0 ay Los Blancos hogaanka ciyaarta ku qabtay.
Goolkan ayuu Ronaldo taariikh cusub ku dhigay wuxuuna ahaa goolkiisii 50 aad ee uu ka dhaliyay Champions Leaque-ga gaar ahaan kulamada ka soo bilaama wareega 16 ka kooxood ilaa finalka, mana jiro ciyaartoy kale oo rekodohkan gaadhay. Sidoo kale goolkan ayaa ahaa goolkii 101 aad ee uu Ronaldo ka dhaliyay Champions Leaque-ga waana tiro hal gool ka badan inta gool ee ay Atletico Madrid ka dhalisay Champions Leaque-ga.
DAQIIQADII 16 AAD Real Madrid ayaa ugu dhawaatay in ay goolka labaad la timaado kadib markii uu Toni Kroos kubbad fiican koorne ka soo tuuray waxaana darbo madaxa ah goolka labaad ee Madrid ku dhalin gaadhay Varane balse goolhaye Oblak ayaa sameeyay badbaadin cajiib ah.
DAQIIQADII 17 AAD Atletico Madrid ayaa heshay fursada kaliya ee ay gool cadaan ah ku dhalin kartay oo ay abuurtay qaybtii hore ee ciyaarta kadib markii uu Koke kubbad dilaa ah ka hoos saaray difaaca Madrid wuxuuna banaan iskugu saaray Gameiro iyo goolhaye Navas iyada oo Navas uu awooday in uu kubbada dirqi kaga badbaadiyo kooxdiisa oo laga dhalin lahaa goolka barbaraha. Alla maxay halis ahayd.
DAQIIQADII 29 AAD Karim Benzema ayaa ugu dhawaaday inuu dhaliyo gool muddo laga sheekayn lahaa kadib markii uu Ronaldo kubbad ka soo karoosay dhinaca bidix isla markaana uu xidiga ree France kubbad laba lugoodley ah uu isku dayay in uu gool ku dhaliyo laakiin kubbada ayaa sentimitir u martay birta goolka.
Intaa wixii ka danbeeyay ciyaarta ayaa noqotay mid adag isla markaana ay Atletico Madrid dib isku soo habaysay waxayna kooxda martida ahayd raadinaysay qaabkii ay ciyaarta ugu soo laaban lahayd iyada oo Godin uu helay fursada kaliya ee labaad oo ay gool ku dhalin kareen.
Guud ahaan qaybtii hore ee ciyaarta ayaa Real Madrid ahayd kooxda garooka wax kasta ka samaysay laakiin Zidane ayaan ku faraxsanayn in kaliya ay kooxdiisu dhalisay kaliya hal gool. Dhamaadkii qaybtii hore ee ciyaarta Daniel Carvajal ayuu dhaawac soo gaadhay waxaana kaydka laga soo kiciyay Nacho balse waqtiga ayaa dhacay intii aanu soo galin waxanaa lagu kala nastay 1:0 ay Real Madrid hogaanka ciyaarta ku haysay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta Daniel Carvajal ayaa awoodi waayay in uu garoonka ku soo laabto waxaana lagu soo badalay Nacho oo la soo raaciyay ciyaartoyda Real Madrid. Atletico Madrid ayaa qaybtii danbe ee ciyaarta soo laabtay iyada oo dardar fiican ku socota laakiin Atletico Madrid ayaa weerar ahaan aad u liidatay waxayna kubbada ay soo dhisaan ku burburaysay inta ayna xerada ganaaxa Madrid soo gaadhin.
DAQIIQADII 57 AAD Simeone ayaa shaxdiisa laba isbadal ku sameeyay wuxuuna ciyaarta ka saaray Kevin Gameiro oo kaliya hal fursad oo gool lagu dhalin karayay helay wuxuuna kaydka uga yeedhay Fernando Torres, wuxuuna sidoo kale ciyaarta ka saaray Saúl Ñíguez waxaana kaydka ka soo baxay Nicolás Gaitán.
Ciyaarta ayaa noqotay mid xamaasadu ka yaraatay wuxuuna Zidane kaydka uga yeedhay Marco Asensio waxaana ciyaarta laga saaray Francisco Isco halka Simeone uu isna sameeyay badalkiisa saddexaad wuxuuna ciyaarta ka saaray Yannick Carrasco oo kulankan ku fashilmay wuxuuna kayka ka soo kiyay Ángel Correa.
Marco Asensio oo xili ciyaareedkan wacdaro dhigaya ayaa wax badan ku soo kordhiyay hal abuurka Real Madrid isaga oo Isco kaga saamayn batay in in uu weerarka si fiican u caawiy. Real Madrid ayaa dib u bilawday in ay fursado abuurto.
DAQIIQADII 73 AAD GOOOOOOOOOOOOOL!! Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyay goolkiisa laabad ee uu Real Madrid hogaanka ugu dheereeyay kadib markii ay difaaca Atletico Madrid ee Godin iyo Filipe Luis ay si buuxda ugu fashilmeen in ay iska saaraan kubbad uu Marcelo u soo bixiyay Benzema kaas oo kubbada isku dhaafiyay Ronaldo oo si xoogan shabaqa kubbada ugu dhaqaajiyay, waxayna ciyaartu noqotay 2:0 ay Real Madrid.
DAQIIQADII 78 AAD Karim Benzema ayaa ciyaarta laga saaray kadib markii uu saamayn fiican ciyaarta ku yeelan waayay waxaana kaydka looga yeedhay da’yarka kale ee xili ciyaareedkan isa soo muujiyay ee Lucas Vázquez kaas oo Zidane siiyay hal abuur kale oo ay kooxdisu u baahnayd.
DAQIIQADII 86 AAD GOOOOOOOOOOL!! Cristiano Ronaldo ayaa markan dhamaystirtay saddexleyda uu kulankan ka dhaliyay kadib markii uu difaaca Atletico Madrid hurdo dheer seexday isla markaana uu Lucas Vázquez kubabd hadiyad ah uu goolka Atletico Madrid uu ku soo horsiiyay Ronaldo kaas inta uu kubbada joojistay si degan oo aan dhibaato lahayn markii saddexaad shabaqa ku gaadhay, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 3:0 ay Real Madrid iyo Ronaldo hogaanka ciyaarta ku hayaan.
Ciyaarta ayaa noqotay mid lagu kala baxay isla markaana ay Atletico Madrid si buuxda ugu fashilantay ciyaarta isla markaana ay Real Madrid heshay natiijo wayn oo ay kulanka lugta labaad si buuxda ciyaarta ugu maamuli karto. Los Blancos ayaa haddaba umuuqata in ay lug kula sii jirto finalka Champions Leaque-ga waxayna ugu danbayn ciyaartu ku dhamaatay 3:0 ay Real Madrid ku dubatay dariskeeda Ateltico Madrid.